အစစ်အမှန်ဖြစ်သော Kamisori Shears (かみそり) ဂျပန် - ဂျပန်ကတ်ကြေး
အစစ်အမှန်ဖြစ်သော Kamisori ညှပ်
ပင်မစာမျက်နှာ / အစစ်အမှန်ဖြစ်သော Kamisori ညှပ်
Kamisori Revolver Professional ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
Kamisori ကပျကြေး $ 499.00 AUD $ 699.00 AUD
Kamisori Pro Jewel III ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
Kamisori Diablo Professional ဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 379.00 AUD $ 439.00 AUD
Kamisori အနက်ရောင်စိန် III ကိုဆံပင်ညှပ်အစုံ
Kamisori အနက်ရောင်စိန် III ကိုဆံပင်ညှပ်ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 499.00 AUD $ 595.00 AUD
Kamisori Jewel နှစ်ထပ်ဆုံလည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆံပင်ညှပ်ဆံညှပ်အစုံ
Kamisori ညှပ် $ 650.00 AUD $ 750.00 AUD
Kamisori ရတနာ III ကိုဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 449.00 AUD $ 599.00 AUD
Kamisori အနက်ရောင်စိန် III ကို Textur ညှပ်
Kamisori Jewel-III ကိုဆုံလည် Texturizing ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 499.00 AUD $ 599.00 AUD
Kamisori Jewel III ကိုဆုံလည်ဆံပင်ညှပ်ညှပ်
Kamisori Pro ကို Jewel III ကို Texturizing ညှပ်
Diablo Professional Texturizing ညှပ်
Kamisori ညှပ် $ 349.00 AUD
Kamisori ညှပ် $ 1,099.00 AUD $ 1,499.00 AUD
Kamisori ညှပ် $ 1,095.00 AUD $ 1,499.00 AUD
Kamisori Shears သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းအတွက်အထူးကောင်းမွန်သောဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများကိုထုတ်လုပ်သည်။ ၎င်းတို့သည်နိုင်ငံတကာတွင်ကျော်ကြားပြီးလေးစားခံရသည့်ဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ညှပ်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။
အသုံးပြုခြင်းအတွက်ထိပ်ဆုံး5အကျိုးကျေးဇူးများ Kamisori ညှပ်
Kamisori အသုံးပြုမှု ခိုင်မာဂျပန်သံမဏိ ကြောင်းပြတ်သားခုံးအစွန်းဓါးရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Kamisori ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ရှည်လျားရှိပါတယ် နိုင်ငံတကာအနိုင်ရ၏ဂုဏ်သတင်း ဆု ဝယ်ခြင်းငှါရရှိနိုင်သောအကောင်းဆုံးဆံပင်အလှပြုပြင်ခြင်းကတ်ကြေးများအတွက်။
အဆိုပါဆံပင်ညှပ်ဖြတ်ညှပ်တစ် ဦး ကိုအသုံးပြုပါ ပရီမီယံခုံးအစွန်း ခုတ်, အမှတ်, ဆလိုက်နှင့်ရှိသမျှသည်အခြားဆံပင်ညှပ်ရိုက်ခြင်းနည်းစနစ်များအတွက်သင့်လျော်သောဓါး။
တစ်ခုချင်းစီကိုမော်ဒယ်ဖြစ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဖြတ်တောက်ခြင်းများအတွက် ergonomic တစ်နေ့လုံးဆံပင်!
အခြားအမှတ်တံဆိပ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်, Kamisori ထူးခြားတဲ့ထုတ်လုပ်သည် ကန့်သတ်ထုတ်ဝေဒီဇိုင်းများ ဒါကခေတ်မှီပြီးစတိုင်ကျတယ်။
စစ်မှန်အမှုအမျိုးမျိုးရှိသမျှအမိန့် Kamisori အမှတ်တံဆိပ်ပါဝင်သည် အခမဲ့ပို့ပေးသည် ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာ!
ထုတ်ကုန်တစ်ခုစီသည်လက်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအရည်အသွေးရှိသံမဏိအချို့မှရရှိသည်။ Kamisori သူတို့၏ကွဲပြားခြားနားသောအရည်အသွေးမြင့်သောကတ်ကြေးများထုတ်လုပ်မှုလိုင်းတွင်မိမိတို့ကိုယ်ကိုဂုဏ်ယူကြသည်။
အကြောင်းပို Read Kamisori
Kamisori သြစတြေးလျ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုဆိုင်ရာ protocol သည်တင်းကြပ်သည်။ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်နှစ်ပေါင်းများစွာလေ့လာမှုနှင့်သုတေသနမှသူတို့၏အဆင့်အတန်းကိုပါးနပ်စွာတည်ဆောက်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ထားသည်။ ညှပ်တစ်ခုချင်းစီသည်တိကျခိုင်မာသည့်လက်မှုလက်ရာကိုဖြတ်သန်းသည်။ အဆင့် ၉၃ ခုသည်အဆင့်မြင့်အရည်အသွေးနှင့်ကျော်ကြားစေသည့်ဂုဏ်သိက္ခာရှိသောနောက်ဆုံးထုတ်ကုန်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အသုံးပြုသည်။
ထိုသို့သောလက်မှုလက်သည်တစ်ညတာတွင်မဖြစ်နိုင်ပါ၊ သူတို့သည်ဆံပင်ညှပ်ခြင်းဒီဇိုင်းများကိုမျိုးဆက်သစ်များအတွက်ဒီဇိုင်းနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်နေပြီဖြစ်သည်။ ၏မျက်စိ၌ Kamisoriအဆင့်မြင့်ဓါးဖြင့်လုပ်ခြင်းသည်အနုပညာပုံစံတစ်ခုဖြစ်သည်။
အရည်အချင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောလူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး တည်းသာအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များကိုဖြန့်ဝေရန်နှင့်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ထိုကဲ့သို့သောနည်းလမ်းများနှင့်နည်းစနစ်များကိုကျွမ်းကျင်စွာတတ်နိုင်သည်။ အများကြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုများနှင့်မျိုးဆက်နည်းစနစ်များအပြီးတွင်ရလဒ်သည်ပေါ့ပါး။ အပြည့်အဝမျှတသောညှပ်ညှပ်ဖြင့်လျင်မြန်ပြီးတိကျသော၊
Kamisoriဒီဇိုင်းပိုင်းဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များကိုအများအားဖြင့်လက်ဖြင့် ပြုလုပ်၍ ယနေ့ခေတ်အသုံးပြုနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသောအရာများဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောစိတ်ဝင်စားဖွယ်လက်မှုလက်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းကထိုကဲ့သို့သောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတ္တု၏ထိုကဲ့သို့သောကွဲပြားခြားနားနယ်ပယ်ပူးပေါင်းမည်။
Kamisori Shears Australia သည်ပရီမီယံဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ခံစက်ကိုရောင်းချသည်
သြစတြေးလျဆံပင်ကျွမ်းကျင်သူများသည်ဖြတ်တောက်ခြင်းကိရိယာများအတွက်မြင့်မားသောစံနှုန်းများရှိပြီး Kamisori အမြဲနှစ်သက်နှင့်ကျေနပ်။
တပ်ဆင်နေစဉ်ကာလတစ်လျှောက်တွင်အတွဲတစ်ခုစီသည်ရှည်လျားသောလေ့လာမှုမှရသောရလဒ်များကို အသုံးပြု၍ အလွန်တရာတည်ဆောက်ထားသည်mination, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံ။ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်သည်အပြစ်ကင်းမှုသာဖြစ်ကြောင်းအာမခံရန်ထူးခြားသောသတိပြုမှု ၉၃ ခုတိုးတက်မှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဝယ်သင့်သနည်း Kamisori ဆံပင်အလှပြုပြင်ရေးကတ်ကြေးလား။
Kamisoriတီထွင်ထားသောဆံပင်ညှပ်ညှပ်ညှပ်ညှပ်များသည်ယနေ့လက်လှမ်းမီနိုင်သောအကောင်းဆုံးပစ္စည်းများဖြစ်သည့်လက်ဖြင့်လက်ဖြင့်ထုတ်လုပ်သည်။ အခြားမည်သည့်အဖွဲ့အစည်းမျှထိုကဲ့သို့သောထူးခြားသည့်လက်မှုအနုပညာနှင့်အတူထိပ်တန်းအဆင့်မြင့်သတ္တုများနှင့်မတူပါ။ နောက်ဆုံးထုတ်ကုန်သည်အမြန်၊ တိကျပြီးချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေရန်အတွက်ပေါ့ပါးသော၊
တပ်ဆင်စဉ်ကာလအတွင်း၊ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်ရှည်လျားသောလေ့လာမှုမှရသောရလဒ်များကို အသုံးပြု၍ ထူးခြားစွာတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်mination, စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံ။ စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်နောက်ဆုံးပေါ်ထုတ်ကုန်သည်အပြစ်အနာအဆာကင်းခြင်းသာဖြစ်ကြောင်းအာမခံရန်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောသတိထားမှုပေါင်း ၉၃ ခုဖြင့်တိုးတက်ခဲ့သည်။ Kamisoriထိပ်တန်းကျွမ်းကျင်လုပ်သားများကအသက်အရွယ်မရွေးဆံပင်ညှပ်စက်များပြုလုပ်ကြသည်။ ချွန်ထက်သောအစွန်းဖြတ်ခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်အတွေ့အကြုံရှိသောလူအများကိုအထီးကျန်စေနိုင်သည့်လက်ရာလက်ရာတစ်ခုဖြစ်သည်။minate ။
ကျွန်ုပ်တို့ပြုလုပ်သောစက်ကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာသည်။ စားသုံးသူ၏အကြွင်းမဲ့သစ္စာရှိမှုကိုအာမခံရန်ကျွန်ုပ်တို့လုံးလုံးရှိနေသည်။ သငျသညျ၏စုံတွဲတစ်တွဲကိုဝယ်သည့်အခါအချက်မှာ Kamisori သင့်အားကျွန်ုပ်တို့၏စစ်မှန်သောတစ်သက်တာအာမခံချက်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်မတော်တဆထိခိုက်မှုအာမခံနှင့် ၁၅ ရက်ကြာငွေပြန်အမ်းခြင်းတို့ဖြင့်သင်ဖုံးအုပ်ထားသည်ကိုတွေ့ရလိမ့်မည်။
အံ့ equ စရာကောင်းသည့်ညီမျှခြင်း၊ ပြိုင်ဘက်ကင်းသောပြတ်သားမှု၊ အတန်းအစား၏အနုပညာအလုပ်။ Kamisori ညှပ်ညှပ်ညှပ်များကိုကမ္ဘာ့နေရာအနှံ့ရှိဆံပင်အလှပြုပြင်သူများကအသုံးပြုပြီးအကြံပြုသည်။
စုံတွဲတစ်တွဲစီသည်လေ့လာခြင်း၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းများမှရရှိသောရလဒ်များကို အသုံးချ၍ လိမ္မာပါးနပ်စွာတည်ဆောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နဂါးဌန်အမျိုးအစားသည်အလှအပဆရာအား Vogue၊ အတိအကျညှပ်ညှပ်ညှပ်ခြင်းဖြင့်လန်းဆန်းစေသည်။ #KamisoriNinja
မြင့်မားသောစတိုင်နှင့်အတူ wedded ဂျပန်ဒီဇိုင်းဒီဇိုင်း၏အံ့သြဖွယ်အမှု။ သင့်ရဲ့တီထွင်မှုကိုလွှတ်ပါ။ #KamisoriNinja
ရိတ်၏အထူး Kamisori သင်တုန်းကိရိယာများ
Art Of Shaving အမျိုးအစားသည်အကောင်းဆုံးဂျပန်သံမဏိဖြင့်ဖန်တီးထားသောဖြောင့်မတ်သောဖြတ်တောက်ခြင်းအနားကိုလန်းဆန်းစေသည်။ Kamisori အရည်အသွေးမြင့်ပုံစံကိရိယာများအတွက်ပွဲ ဦး ထွက်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်ရပ်တည်နေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနုပညာရွေလှောင်ခြင်းဖြင့်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
ပိုပြီးအပေါ် Read Kamisori ဤနေရာတွင်ညှပ်